Uzulu Uqhinqa Isililo Ngekhefu LikaMugabe Elilendleko Enengi
Uzulu uqhinqa isililo eZimbabwe ngekhefu likaMongameli Robert Mugabe esithi kade kungamelanga ahambe empumalanga ngesikhathi abantu makhaza besidla ingqweqwe zomlomo.
Abakhuluma leStudio 7 eHarare abagoqela uMnu. Andrew Phiri, John Moyo, Moses Chungwa labanye babo bathe bekumele uMugabe athathe ikhefu lakhe endaweni ezinjenge Matobo Hills, Kariba, Victoria Falls le Zimbabwe Ruins kulokuthi aye endaweni ezinjenge Malaysia.
Bathi ukuhamba kwakhe kutshengisa ukuthi kakhathali ngokuthi izisebenzi zikahulumende ezinye kazikatholi iholo.
UMoyo uthe, “Umnotho welizwe uguqe ngamadolo ngakho-ke uMugabe bekumele ahlale lapha kulokuthi ayekwamanye amazwe ngesikhathi sekhufu lakhe". “Okumangalisayo yikuthi konke lokhu kwenzakala ngezikhathi izisebenzi zikahulumende zingakatholi iholo likaMpalakazi. Lokhu kutshengisela ukuthi abalandaba lathi.”
Kodwa-ke uMnu. Joseph Tshuma okudale leCentral Committee kubandla leZanu PF njalo omele iPelandaba Mpopoma kudale lephalamende utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi uMugabe ulelungelo lokuya kukhefu loba uzulu ehlupheka.
Kasenelisanga ukukhuluma loMnu. George Charamba, isikhulumeli sikaMongameli Mugabe okade engaphenduli umakhalekhukhwini wakhe.